Faritra atsimon’ny nosy Mahery vaika ny 8 amin’ireo basy 32 tratra
Araka ny tatitra ny volana febroary 2019 nentin’ny zandarimariam-pirenena tamin’ny mpanao gazety, nahatratra 32 ny fitaovam-piadiana tra-tehaka, tamin’ny faritra atsimo afovoan’ny Nosy ka ny valo mahery vaika,
izay fampiasa amin’ny tany miady natokana hiatrehana ny fahavalom-pirenena. Tato anatin’ny iray volana, nahatratra 32 ny basy saron’ny zandary tamin’ireo dahalo. Ny valo tamin’ireo basy “armes de guerre”, tahaka ny kalachnikov, hoy ny lehiben’ny komandin’ny zandarimariam-pirenena, ny Jeneraly Njatoarisoa Andrianjanaka, ny alakamisy teo. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny loharanon’ireny fitaovam-piadiana ireny.
Betsaka ireo tratra sy ireo bala nanaovana fanadihadiana fa tsy mbola nisy vaovao ofisialy avy amin’ireo tompon’andraikitra nanambara ny fiaviany. Resaka politika fotsiny hatreto no loharanom-baovao nivoaka nanilihana fa basy voaroba nandritra ny krizy nitranga teto amin’ny firenena ny ankamaroan’izy ireny. Araka ny fampitam-baovao hatrany, tao Isandra sy Ikalamavony no nahatrarana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo. Efa nihanaka nianavaratra eto amin’ny Nosy ireo fitaovam-piadiana mahery vaika raha tany amin’ny faritra atsimon’ny Nosy, am-polony taona lasa izay. Nampita vaovao hatrany ny eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena fa ny 14 amin’ireo fitaovam-piadiana 32 ireo dia basy vita gasy. Efa misy ozinina fanamboarana basy mihitsy eto Madagasikara raha ny fijery ny basy vita eto an-toerana. Mbola tadiavina io toerana io, hoy ny Jeneraly Njatoarisoa Andrianjanaka. Mbola ezak’ireo mpitandro ny filaminana ny fanadihadiana lalina mikasika ny toerana iavian’ireo basy vita gasy maro tratra.